खुशीको खबर ! आज घट्यो सुन चाँदीको मूल्य, हेर्नुस् आजको बजार भाउ – " सुलभ खबर "
खुशीको खबर ! आज घट्यो सुन चाँदीको मूल्य, हेर्नुस् आजको बजार भाउ
१६ फाल्गुन, काठमाडौं :नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। शुक्रबार तोलामा ५ सयले घटेर ७९ हजार २ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य भने ७८ हजार ९ सय कायम गरिएको छ।
बिहीबार सुन तोलामा २ सयले वृद्धि भएर ७९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै, चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य घटेको छ। आज चाँदी तोलाको ८८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।बिहीबारको तुलनामा यो मूल्य २० रुपैयाँ कम हो।
निरन्तर उकालो लागेर प्रतितोला ८० हजार ३ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।अमेरिका र इरानको तनावले बढेको सुनको भाउ तनाव मत्थर भएसँगै ओरालो लागेको सुनको मूल्य फेरि कोरोना भाइरसका कारण बढन पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको भनाइ छ
जाडो मौसम शुरु भइसकेको छ । जाडोयाममा धेरै चिसो हुने भएकाले नवजात शिशु र सुत्केरी आमा दुवैका लागि जोखिम हुनसक्छ । नवजात शिशुको केयर गरिएन भने उनसमा छिटो संक्रमण हुनसक्छ ।नवजात शिशुलाई जति नै कपडा लगाइदिएपनि चिसो हुन्छ । मौसम परिवर्तनको असर उनीहरुलाई धेरै हुन्छ जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले नवजात शिशु पनि धेरै कमजोर हुन्छन् । चिसो मौसममा
बच्चाहरुलाई रुघाखोकी र घाँटीमा संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ ।जाडो मौसममा चिसोबाट बच्न न्यायो कपडा लगाएर तातो बनाएर राख्नुपर्छ । चिसो बढी भएमा बच्चा बिरामी पनि पर्न सक्छ । बच्चाको सास फेर्ने नली साँघुरिन्छ यस्तोमा खकार जमेर सास लिनमा कठिनाई हुन सक्छ ।नवजात शिशुलाई चिसोबाट कसरी जोगाउन यस्तो गर्नुस्
धुलो, धुँवादेखि नवजात शिशुलाई टाढा राख्नुपर्छ । धुलो, धुँवाले नवजात शिशुलाई दमको समस्या हुने, झाडापखला लाग्ने हुनसक्छ । त्यसैले घर वरपरको वातावरणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।नवजात शिशुलाई दिनै नुहाउनुको सट्टा मनतातो पानीमा सफ्ट एन्टिब्याक्टेरियल लिक्वीड हालेर नरम कपडा भिजाएर पुछ्नुपर्छ ।मौसम बदल्ने वित्तिकै शिशुलाई न्यानो कपडा लगाइदिनु पर्छ । हल्का चिसो छ भनेर वेवास्ता गर्नु हुँदैन शिशुलाई जहिले पनि मोजा टोपी लगाइदिनुपर्छ ।शिशुलाई मसाज एकदमै जरुरी हुन्छ । मसाज गर्दा तेललाई मनतातो बनाएर प्रयोग गर्ने गर्नुहोस् ।
शिशुलाई न्यानो कपडा लगाइदिएर घाममा राख्नुपर्छ । बिहानको घाममा राख्दा ताजा हावाको साथै भिटामिन–डी पनि प्राप्त हुन्छ ।शिशु ६ महिना भन्दा बढी भएको छ भने खाना पनि खान्छ । खाना खुवाँउदा चिसो र बासी खाना खुवाउनु हुँदैन ।स्वेटर लगाउँदा राम्रो क्वालिटिको मात्र लगाइदिने गर्नुपर्छ । जस्तो पायो त्यस्तै क्वालिटिको कपडाले शिशुलाई एलर्जी हुनसक्छ ।नवजात शिशुको छाला एकदमै संवेदनशिल हुन्छ । त्यसैले संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ । त्यसकारण शिशुलाई समाउन अघि साबुन पानीले राम्रोसँग धुनुपर्छ ।शिशुलाई आमाको दुध अघाउन्जेल खुवाउनुपर्छ । आमाको दुधमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ ।
धकेलाधकेल हुँदा वरिष्ठ नेता पौडेलको छातीमा समस्या : रिहाइको माग गर्दै तनहुँमा प्रदर्शन